Brazil neJapan munguva pfupi ichave nebasa reECG rinoshanda paApple Watch | Ndinobva mac
Brazil neJapan munguva pfupi ichave nebasa reECG rinoshanda paApple Watch
Hazvisi nyore kwazvo kushandisa kuverenga kweApple ECG munyika nekuda kwemutemo uye hutano hweumwe neumwe wavo. Kwedu, iro basa rakasvika nguva pfupi yapfuura kuziviswa asi mune dzimwe nyika dzakawanda izvi Electrocardiogram basa richiri rakaremara. Zvino sekureva kweMacOtakara svikiro, iyo yepamutemo agency yeFemaceutical uye Medical Zvigadzirwa zveJapan (PMDA) yakagadzirisa runyorwa rwevanyoreswa vekunze vagadziri kuisa Apple uye neizvi, iro ECG basa rinosvika zvirokwazvo kune vashandisi vane iyi Series 4 kana Series wachi 5 .
Kune rimwe divi, iyo Cupertino kambani zvakare yakanyoreswa yekupedzisira Kurume 25 mubazi rezvekurapa reBrazil, saka zvingangoita kuti munyika ino vachakurumidza kutanga kunakidzwa neECG app pane yavo inoenderana Apple Watch mhando.
Izvo zvakakosha kuti upfuure iyo firita yevakuru vehutano mune imwe neimwe yenyika kuti ikwanise kumisa basa iri uye kana yangobvumidzwa kungoita basa iri kure paApple Watch inoenderana, sezvakaitika pano uye nedzimwe nyika dzakatevera United States, idzo dzaive dzekutanga kuve chimiro chinoshanda pane chishandiso.
Iyo Apple Watch Series 4 anga ari mawatch ekutanga akawedzera basa iri uye izvozvi modhi inotevera neayo anouya gare gare anozoiwedzerawo. Nyika yekupedzisira kugamuchira sarudzo yeECG kuverenga uye zvisina kujairika moyo mutinhimira ziviso yaive Saudi Arabia mushure mekunge Apple yatanga vhezheni ye watchOS 6.2.5 apfuura Chivabvu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Brazil neJapan munguva pfupi ichave nebasa reECG rinoshanda paApple Watch
Apple yakahaya nyanzvi yekupofomara kupa zano "Ona"
Nhasi maApple Stores ese munyika medu akavhurwa